10 မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 27, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
မင်းမိုဘိုင်းစျေးကွက်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ၊ စျေးကွက်သမားအားလုံးနီးပါးကမင်းဘယ်လိုပြောနေတာလဲ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ ၅၀ ခန့်နှင့်ပြည့်စုံသောမိုဘိုင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ အဖြစ် Marlinspike အတိုင်ပင်ခံ သင်တန်းအစီအစဉ်မှာငါတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ထင်တာထက်မိုဘိုင်းစျေးကွက်အတွက်အများကြီးပိုများတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာတယ်။
စဉ်းစားရန်မိုဘိုင်းစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ ၁၀ ခုမှာ -
အသံ - တစ်နည်းနည်းနဲ့ဒီတစ်ခုအမြဲထွက်ခွာသွားရရှိ :) ၎င်းသည်သင့် site ရှိဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် animation tools များမှတဆင့်ပြည့်စုံသောလမ်းကြောင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုနည်းဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ Twilioသင်၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုခေါ်ယူရန်နှင့်သင်၏အလားအလာများလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းမက်ထရစ်ကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။
စာတို - စာတိုဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်စာရိုက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လိင်အရဆုံးသောနည်းပညာမဟုတ်နိုင်သော်လည်းစာသားနည်းပညာများအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများသည်ကြီးထွားမှုနှင့်မွေးစားခြင်းကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ဒါဟာလူငယ်တွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအရင်ကထက်စာပို့တာတွေများတယ်။
မိုဘိုင်းကြော်ငြာ - ဤအရာများသည်ရှေးဟောင်းနဖူးစည်းစာတန်းမဟုတ်ပါ။ မျက်မှောက်ခေတ်မိုဘိုင်းကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများသည်သက်ဆိုင်မှု၊ တည်နေရာနှင့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍ ကြော်ငြာများကိုတွန်းအားပေးသည်။ သင့်ကြော်ငြာကိုသင့်တော်သောလူ၊ မှန်ကန်သောနေရာ၊
QR ကုဒ်များ - အို၊ ငါနင့်ကိုဘယ်လိုရွံသလဲ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဖုန်းများကသူတို့ကိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးမပြုဘဲဖတ်ရှုသည်။ အထူးသဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအွန်လိုင်းမှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအခါအထူးသဖြင့်ရွေးရန်နှုန်းထားများကိုတွေ့ရသည်။ သူတို့ကိုသေးသေးပယ်ချမထားပါနဲ့။
မိုဘိုင်းအီးမေးလ် - မိုဘိုင်းအီးမေးလ်ကိုဖွင့်နှုန်းထားများ desktop ဖွင့်နှုန်းထက်သာလွန်သော်လည်းသင်၏အီးမေးလ်သည်လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကသင်ဝယ်ယူခဲ့သောသတင်းလွှာပုံစံဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းစက်တွင်အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ?
မိုဘိုင်းဝက်ဘ် - သင့်ဆိုဒ်သည်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်တိုင်သင်၏လုပ်ရန်ကိရိယာများစွာထဲမှတစ်ခုကိုသင်တပ်ဖြန့်နိုင်သည် မိုဘိုင်း site ကိုဖော်ရွေ။ သူတို့ထဲကဘယ်သူမှမပြီးပြည့်စုံပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကဘာမျှမထက်အများကြီးပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်ဆုံးရှုံးနေသည့်အသွားအလာကိုကြည့်ရန်သင့်မိုဘိုင်းခုန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးပါ။
မိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး (mCommerce) - ၎င်းသည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှဝယ်ယူခြင်းလား၊ လယ်ပြင်ဆက်သွယ်ရေးအနီးလူတွေဟာသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းပစ္စည်းကနေဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေကြတယ်။ သူတို့ကသင့်ထံမှဝယ်လို့ရပါသလား
တည်နေရာန်ဆောင်မှုများ - မင်း your ည့်သည်ဘယ်မှာလဲဆိုတာသိရင်မင်းဘာကြောင့်သူ့ကိုမင်းကိုပြောခိုင်းတာလဲ။ တည်နေရာအခြေပြုဝက်ဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကသင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင့်ကိုရှာဖွေပြီးသင့်ထံရောက်ရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။
မိုဘိုင်း Applications ကို - အစတွင်ကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်စိတ်မရှိခဲ့ပါ။ မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာက၎င်းတို့ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လူများသည်သူတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့က၎င်းတို့မှတဆင့်စီးပွားရေးလုပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအက်ပလီကေးရှင်း၊ တည်နေရာ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လူမှုမီဒီယာများကိုမြှောက်ပြီးနံပါတ်များတက်နေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးသို့ SDK ကိုထည့်သွင်းပါ analytics သင်လိုအပ်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိရန်ပလက်ဖောင်း!
tablets - ကောင်းပါပြီ၊ သူတို့ဟာတက်ဘလက်တွေကိုမိုဘိုင်းနဲ့တွဲသုံးတာကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ဘရောင်ဇာတွေကြောင့်သူတို့နည်းနည်းကွဲပြားတယ်။ iPad, Kindle, Nook နှင့် Microsoft Surface တို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်တက်ဘလက်များဖြစ်လာသည် ဒုတိယ screen ကို ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေစဉ် (သို့) ရေချိုးခန်းတွင်စာဖတ်နေစဉ်ရှေးရှေးသူများကသုံးသည် (eww) ။ သင့်မှာ swipey မရှိဘူးဆိုရင် တက်ဘလက် app သင်တက်ဘလက်များပေးနိုင်သည့်ထူးခြားသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအသုံးချသည့် (ကျွန်ုပ်တို့၏ client Zmags ကဲ့သို့) သင်ပျောက်ဆုံးနေသည်။
ကုမ္ပဏီအများစုသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မိုဘိုင်းနည်းဗျူဟာကိုအသုံးချရန်လုံလောက်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုမထင်ကြပါ။ သင်စဉ်းစားလို့မရနိုင်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းရှိသည့်ကုမ္ပဏီဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တင်ပြပါမည်။ Behr ။ Behr တစ် ဦး ချထားခဲ့သည် ColorSmart မိုဘိုင်း application သင်၏အရောင်ပေါင်းစပ်မှုများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ ကင်မရာဖုန်းဖြင့်အရောင်နှင့်ကိုက်ညီစေနိုင်သည်။ အနီးစပ်ဆုံးအရောင်းဆိုင်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ အရောင်ပေါင်းစပ်ရန်အကြံပြုချက်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Tags: တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုမိုဘိုင်း appမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝဘ်သတင်းတိုစနစ်စာတိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့အသံစကားသံကိုအလိုအလျောက်